Izibhakabhaka zase Spring
Imidlalo yezemidlalo kwiminyaka embalwa edlulileyo ayikwenzanga nje ukunyuka okukhulu ekuphuculeni izicathulo nokudala uyilo lwemihla ngemihla. Namhlanje ungathatha ama-sneakers nanoma yiliphi ixesha: kukho imodeli efudumeleyo yezinto ezizinzileyo ezinamanzi, kwaye zikhona izitya zokunyusa ezincinci zokuhamba.
Izitya zokunyusa entwasahlobo
Iinkokeli zehlabathi kwihlabathi lempahla yezemidlalo kunye nezambatho kuyo yonke into yokuqala. Kwakuyi-Nike eyaziwayo, i-Adidas, i-Puma kunye nabanye ababengowokuqala ukuba banake ingqalelo kwizinto ezikhethiweyo zezihlangu zonyaka. Ngeli xesha senza okungaphezulu, zama ukutshintsha kwiingubo ezigqithisileyo kunye neziqhamo ezigqamile kwaye kunjalo ke zonke ezi zinto zenziwayo kufuneka ziqwalasele xa zifumene ukuyila nokukhetha izinto zokwakha izitya zentwasahlobo.
Ngokomzekelo, ama-spring sneakers avela kumgca othandwayo we-Nike Air Max Flyknit kwisithembiso esitsha sonyaka sokuba ngowona mthengisi. Abaqulunqi be-brand ye-Nike eyaziwayo baya kukhulula iindidi ezimbini ze-sneakers zolu hlobo. Iyokuqala iya kwenziwa kwilayibhile yeklasi "yaseburhulumenteni / i-orange / ebomvu", kunye neenqwelo ezithembekileyo zeemidlalo zesihlangu ziya kufumaneka nombala owodwa ngaphezulu.
Amacengekazi aseSwitzerland ase-Adidas nawo ayenziwa ngokugqithisileyo ngenxa yokuyila kwidolophu yasekhaya. Kwiqoqo yamaQela kuza kuba nezinto ezintsha. Njengamaxesha onke, abaqulunqi bezakhiwo baqulunqa i-spring-ehlobo esekelwe kwiimodeli eziqhelekileyo eziye zathandwa ngexesha labo kwaye zifuna ubomi obutsha. Phakathi kwala mabhinqa entwasahlobo, unokulindela izinto ezintsha kwi-series ZX Flux kunye ne-Tech Super.
Kwakhona kulindeleke ukuba uzalise imodeli yeebhondi zonyaka we-autumn-autumn kumgca we-Adidas Y-3. Ezi ziqhuba izicathulo, eziza kukhutshwa ngemibala emibini, enye yazo ifunwa ngokuthe ngqo kwi-unisex. Ngokuba ezi zixhobo zentwasahlobo zasebenzisa izixhobo zeprayimum - ilinen yelinen ecikiweyo yesilivere kunye ne-beige shades. Ngaloo xesha, ama-spring sneakers angaphinda abe yizona zihlangu.
Umkhwa ongcono - iimodeli ezintle zemifanekiso yezandla
Ingubo eBlue ephantsi
Ugqoke ngokucoca ngamacala
Ingubo yembatho evela kwibhokhwe
Iimpawu zeMidlalo zeHlabathi
I-Capsule yomshini wekhofi
Umgca we-LED - njani ukhetha?
I-actress ehamba phambili ngombono we-"Oscar" jury ngo-2016
Imenyu ebomvu inyama
Man Capricorn - njani ukuziphatha naye?
Iitafile zokugqoka kunye nesibuko sokulala
I-celery isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi - ukukhula kwimizi
Isitya sezinto ezidliwayo kwitafile yakho - isaladi "isongo seMalachite"
Iphupha liphi iphupha lezambatho?
Insecticides ye-wide spectrum of action
Isixhobo sokuvumba kwamanyathelo
Imisebenzi yokunxibelelana kwengqondo
Polinazine ngexesha lokukhulelwa
Izinketho zokugqiba i-loggia
Ingubo yentwasahlobo 2018 - yiyiphi iingubo eziza kuba sefeshini entwasahlobo ka-2018?
Isembozo - iimpawu ebusika
Indlela yokucwangcisa amagilebhisi entwasahlobo emva kokuvula-iindlela eziphambili
Ziziphi izenzo zokususa isisu?
Indlela yokukhulisa i-spruce ukusuka kwimbewu?
Ukuxilongwa kwe-PCR yezifo-zengxelo